नेकपाले सरकार चलाउँछ कि सरकारले नेकपा ?​ | Ratopati
personबबिता शर्मा exploreकाठमाडौं access_timeअसार १९, २०७५ chat_bubble_outline0
सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले परम्परागतभन्दा अर्को नयाँ आयाम थप्ने बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । बजेट आएलगत्तै नेता रायमझीले बुटवल पुगेर भनेका थिए, ‘बजेटमार्फत समग्र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र आउनुपथ्र्याे तर यो बजेटले त्यस्तो महशुस गराउन सकेन, बजेटले जनतालाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन ।’
माथिका यी तीन घटनाले नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारबीच कही कतै समन्वयको अभाव रहेको सङ्केत गर्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको कृषि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीले बताइसकेका छन् । नेकपा र सरकारबीचको समन्वयको अभाव देखिरहेका बेला एउटा प्रश्न उठ्छ– नेकपाले सरकार चलाउँछ या सरकारले नेकपा ?
विगतमा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट भएको असहयोगबाट सबैजसो नेता जानकार छन् । यस्तोमा तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले विगतबाट पाठ सिक्ला कि नसिक्ला ? प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
यदि नेकपाले सरकार चलाएको भए मन्त्री मन्त्रीबीचमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव किन देखियो ? समन्वयको अभावले गर्दा सरकार स्प्रिटमा काम गर्न सकेको छैन ।
पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्ने विषयहरू फोरमहरूमा बसेर भन्न सक्छौँ : विष्णु पौडेल, नेकपा महासचिव
मधेसीको समर्थनमा एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । तर उनलाई पार्टीभित्रकै वैद्य समूहले सार्वजनिक रूपमै असहयोग ग¥यो । दलहरूबीच सङ्घीयतालगायत संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति हुन नसकेपछि १५ जेठ ०६५ मा संविधानसभा विघटन भयो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ७ मङ्सिरका लागि चुनाव आह्वान गरे । तर चुनाव हुन सकेन ।